true marriage /zu-ZA/tools-for-life/marriage/steps/the-adventure-of-marriage.html read 4 7 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/marriage_zu_ZA.jpg Umshado
Elinye iphuzu elibalulekile ekudaleni umshado ophumelelayo, noma ukulungisa lowo oseqalile ukuwohloka, ukuxhumana.
UkuXhumana kuyisisekelo sempumelelo yomshado lapho umshado oqinile ungakhula khona. Ukungaxhumani yikho imbangela yokuchitheka komshado.
Okokuqala, ukukhetha umlingani womshado ofanele kungaba nzima kakhulu. Ngaphandle kokuthola ukuqeqeshwa okuyisisekelo kokwahlulela ubuntu bomuntu noma ikhono lokupheka noma lokukhulisa umndeni, iningi labantu lisebenzisa le nto ebizwa ngokuthi “uthando” ukubasiza banqume ukuthi bazoshada nobani. Futhi “uthando” lungakhohlisa futhi kube nzima ukuluqonda.
Akumangazi ukuthi abantu bavame ukukhetha umlingani ongalungile.
Kodwa kunezindlela ezilula zokuthi ungakhethi kuphela umuntu ozoshada naye, kodwa futhi uqiniseke ukuthi umshado uyaqhubeka. Bancike, njalo, ukuxhumana.
Kufanele kube khona ukufana kobuhlakani nobumsulwa phakathi kwendoda nenkosikazi ukuze babe nomshado ophumelelayo.
Kulula ukuthola out izinga lemfundo yalowo ongaba umlingani womshado wakho. Akulula kangako ukusebenza out amandla alowo muntu maqondana nezocansi noma ukukhulisa izingane. Kodwa kuthiwani ngokwahlulela ingqondo yomuntu ephilile?
Esikhathini esedlule, kube nezinhlobo eziningi ezahlukahlukene zokuhlolwa ukuthola out ukuthi umuntu unengqondo engakanani. Ezinye zaziyinkimbinkimbi kangangokuba kwakudingeka ube ngumlingo noma usebenzise uhlelo olukhethekile lwekhompyutha ukuze uqonde imiphumela.
Kwi-Scientology, nokho, kunesivivinyo sokuhlanzeka kwengqondo okulula kakhulu ukuthi noma ngubani angakusebenzisa: iyini “i-lag yokuxhumana” yomuntu? I-lag isho isikhathi phakathi kwento eyenzekayo nenye into eyenzekayo. I- lag yokuxhumana ubude be isikhathi esidlula phakathi kokubuza umbuzo nempendulo yalowo mbuzo ngumuntu obuziwe.
Ngamanye amagama, uma ubuzwa umbuzo, kuthatha umuntu ukuthi aphendule isikhathi esingakanani?
Lapho othile enganikeza impendulo esheshayo, ikutshela ukuthi unengqondo esheshayo nene ngqondo, inqobo nje uma enikeza impendulo ene ngqondo embuzweni. Impendulo ehamba kancane ikutshela ukuthi unekhono elincane nokuhlanya kwengqondo.
Abalingani bomshado abanama-lag yokuxhumana afanayo bazozwana kahle. Kodwa lapho umlingani oyedwa eshesha futhi omunye ehamba kancane, isimo siba nzima ukubekezelela umlingani osheshayo futhi sibe lusizi kulowo ohamba kancane.
Ubunzima bomshado nazo zingavela ngoba omunye umuntu emndenini ubangela ikhefu ekuxhumaneni phakathi kwalaba bobabili. Lokhu kungabangelwa yisihlobo, njengomkhwekazi.
Thatha isibonelo, umkhwekazi ozafika azohlala nabashadikazi. Ukhala ku-nkosikazi ngomyeni futhi ukhononda kumyeni ngenkosikazi. Into elandelayo uyazi, indoda nenkosikazi bayaxabana nsuku zonke futhi abakwazi ukuzwana. Kodwa bebezwana kahle nje engakafiki umamezala.
Ukuxhumana ababenakho phakathi kwabo kuphulwe yisihlobo, kwacasula ozakwethu ngamunye kwabenza baxabana manje.
Enye indlela ukuxhumana kunganqunywa—futhi isizathu esiyinhloko semishado ukwehlukana—umona.
Umona uza ngenxa yokungazethembi komuntu onomona. Kungenzeka noma kube noma kungabi nasizathu sokuthi umuntu abe nomona.
Umuntu onomona wesaba umgudu wokuxhumana efihliwe.
Umgudu wokuxhumana umzila noma indawo lapho ukuxhumana kuhamba khona kusuka komunye umuntu kuye komunye, njengezwi, incwadi, i-imeyili noma ucingo.
Umuntu onesikhwele uzokwenza noma yini ukuzama ukuthola umgudu wokuxhumana ecashile.
Isibonelo, unkosikazi onomona angahlola ngasese wonke ama-imeyili omyeni wakhe. Futhi lapho engabheki, angathatha ucingo lwakhe alalele imiyalezo yakhe yocingo, azame ukuthola out ukuthi ngubani omshayelayo.
Lolu hlobo lwesenzo lwenza omunye umlingani abe nomuzwa wokuthi communication lines ubukhona ziyasikwa, ngoba ucabanga ukuthi unelungelo lokuba umgudu wokuxhumana ezivulekile, kodwa umlingani wakhe womshado uphikelela ukuthi avale eminingi yayo.
Izimpikiswano eziphumela zingacasula kakhulu.
Ngenhlanhla, izinkinga zokuxhumana zomuntu onomona zingalungiswa ngokululeka kuwe-Scientology counseling.
Kunolwazi oluningi ku-Scientology ngokusingathwa komshado, kepha nansi umkhondo oyisisekelo womshado ophumelelayo: ukuxhumana!
Ngokufunda indlela yokuxhumana okuhle nokuhlanzekile phakathi kwabalingani nokuthi ungagcina kanjani lokho ukuxhumana kugeleza, umshado uzophumelela.